सामाजिक को भविष्य मार्केटिंग को भविष्य हो Martech Zone
मैले हालसालै भाग लिने अवसर पाएँ ExactTarget जडानहरू २०१२, र धेरै प्यानल छलफलहरूको बीचमा, मैले विशेष गरेर एउटा हकदारको रमाईलो गरें सामाजिक २०२०: हामीलाई के हुन्छ? एक्जेक्टटरेजेटमा वीपी मार्केटिंग रिसर्च एण्ड एजुकेशन अज्ञात जेफ रोहर्स द्वारा संचालित, यसमा मार्गरेट फ्रान्सिस, एक्सेक्टट्रेजेटको सामाजिक उपाध्यक्ष, डेभिड बर्कवित्ज, I 360० आईमा उभरते मिडियाको भीपी, स्टीफन Tarleton, ग्लोबल च्यानल र एसएमबी मार्केटिंग बजारभोइसका निर्देशक, र साम डेकर, सीईओ र संस्थापक मास प्रासंगिकता.
प्यानलले केहि थोरै विचार पुर्‍याउने अन्तर्दृष्टि, र केहि भविष्यवाणीहरू, वा पाठ्यक्रमहरू थियो। एक मार्केटरको रूपमा, म भविष्यमा कस्तो देखिन्छ भनेर मेरो आफ्नै विचारहरू छन्, र यसको अन्त नजिक पंच लाइन छ, तर अर्को केहि अनुच्छेदहरूले केही परिप्रेक्ष्य प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी कहिलेकाँही बजारहरू बिर्सन्छौं कि हाम्रो मार्केटिंग पूर्वजहरू सिकारीहरू थिए। तिनीहरू आफ्नो ग्राहकको प्रतिस्पर्धी बजार बाट बाहिर बाहेक अरू केहि चाहँदैनथे। यदि तिनीहरूले भाला, तरवार र tomahakks मार्फत तिनीहरूलाई शिकार गर्न सक्ने भए, तिनीहरूसँग हुने थियो।
जब हामी मार्केटिंगको ऐतिहासिक कथनको माध्यमबाट प्रगति गर्छौं, हामी सबैले सुस्त प्रगति बुझ्दछौं, जसले गर्दा सही सन्देश, सही व्यक्ति, सही समयको धारणा हुन्छ। त्यो हदसम्म, हामी कहिलेकाँही हाम्रो क्राफ्टलाई सही प्रमाणित गर्न सक्छौं कि हामी वास्तवमै उपभोक्तालाई मूल्यवान् सेवा प्रदान गरेर एउटा अनुमोदन गरिरहेछौं। आखिर, हामीले गर्नुपर्ने काम छ।
तर यसको सामना गरौं; ईसापूर्व २,००० मा लक्ष्य थियो हाम्रा ग्राहकहरुलाई बजार प्रभुत्व प्राप्त गर्न मद्दत गर्नुहोस्। अनि त्यो अझै छ.
सबै चीजहरूको सामाजिकको उमेरमा छिटो अगाडि। सामाजिक टेक्नोलोजीले कर्पोरेट अमेरिकालाई क्रसहेयरमा समात्यो। अचानक शिकारी केहि कमजोर भयो। हामीले यो नयाँ वास्तविकतालाई प्रतिक्रिया दियौं, र हामीले यसलाई प्रायः खराब तवरले गरेका छौं। आज कतिवटा कम्पनीहरूले पोष्ट गरिएको प्रश्नहरूको लागि पर्याप्त प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् twitter?
यसको बारेमा कुनै गल्ती नगर्नुहोस्। यदि सामाजिक साथ नआएको भए व्यापारको दुनियाले उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्दैन। यदि निगमहरू यति ग्राहक केन्द्रित हुनको लागि उत्सुक थिए भने के तिनीहरूले सामाजिक च्यानलहरूको आफ्नै संस्करणहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न? हामी अझै यो लडाई वा उडान संसारमा बाँचिरहेका छौं, र धेरै कम्पनीहरूले यसलाई संस्थागत गर्न यस नयाँ सामाजिक वास्तविकतालाई नियन्त्रण गर्न सख्त प्रयास गरिरहेका छन्।
एक पटक मार्केटिंग समुदायमा धेरैले सामाजिक पकड गरे, यो प्रलोभनको रूपमा व्यवहार गरियो, एउटा रूखमा बाँधिएको थुमा, असह्य सिंहलाई पासोमा पार्ने लोभ प्रयोग गर्‍यो। तर हाम्रो जमात भित्र अर्को समूह छ, ती मानिसहरु जसले सामाजिक अनौठो, रहस्यमय नयाँ जनजातिको रूपमा देख्छन् जुन हाम्रो भूमिमा भइरहेको छ। हो, तिनीहरू फरक छन्, तर तिनीहरू सहयोगको उपहार ल्याउँदछन्, सुन्ने समुदायको साझा।
हामी अझै शिकार गर्छौं, तर हामी यो विस्तारित परिवारको रूपमा गर्छौं। हामी केवल हामीलाई के आवश्यक छ लिन्छौं, र हामी आगो चारै तिर कथा साझा। यो एउटा सूक्ष्म, तर गहन परिवर्तन हो कि हामी कसरी मार्केटर्सले हाम्रो शिल्पमा पुग्दछौं। यसको मतलब यो होइन कि हामी हाम्रो अभियानहरू, हाम्रो मेट्रिक्स, वा हाम्रो बजार बन्ने कारणलाई रोक्दछौं। यसको मतलब यो होइन कि हामी एउटा ठूलो जनजातिको साथ शिकार गर्दछौं, र हामी हाम्रो निर्णयहरूलाई धेरै फरक दृष्टिकोणबाट सूचित गर्दछौं।
त्यसैले हामी यहाँ छौं, यो नयाँ वास्तविकता भित्र मार्केटरहरू काम गरिरहेका छन्, यद्यपि हामी अझै कहिलेकाँही व्यवहार गर्दछौं जस्तो कि हामी अझै पुरानो संसारमा छौं। मार्केटिंग भोक खेलमा तपाईं कुन चरित्र हुनुहुन्छ? अब प्यानलले सोधेको प्रश्नमा फर्कनुहोस्, र सामाजिकको अज्ञात भविष्यको संसारलाई कसरी भेट्ने भनेर मेरो सिफारिशहरू। र मेरो एक वाक्य प्रतिक्रिया हो:
टेक्नोलोजीको बारेमा ओब्सिसि Stop रोक्नुहोस्!
इन्टरनेट स्वाभाविक रूप मा सामाजिक हो, तर जानकारी को लागी शाब्दिक रूप से प्रत्येक चैनल संतृप्त, ध्यान को लागी गाह्रो र गाह्रो हुन्छ। भविष्यका सामाजिक विक्रेताहरू जसले टेक्नोलोजीक अवरोधका कारणहरू स्वाभाविक रूपमा यसलाई प्रतिक्रिया दिनेछ, र अज्ञात कारक वास्तवमा तल उत्रिन्छ यो कति विघटनकारी हुनेछ? नयाँ आदिवासी बजारहरू बुझ्दछन् कि संगठनहरूलाई सामाजिक प्रविधिहरूको भविष्यवाणी गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यसको सट्टामा उनीहरूले के कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ कि जुन महत्त्वपूर्ण अवरोधहरू आउँदछन् अर्थात् महत्वपूर्ण हुन सक्छन्, जुन व्यवहार जुन प्रविधिको परिवर्तनहरूको पर्वाह नगरी आदर गरिन्छ।
टैग: 360iबजारभोइजकनेक्शन २०१२डेभिड बर्कवित्जprectargetअचूकटर्जेट जडानहरूमार्केटिंग को भविष्यसामाजिक को भविष्यसामाजिक मिडिया को भविष्यजेफ्री रोह्रेसमार्गरेट फ्रान्सिसजन प्रासंगिकतासैम डेकरस्टीफन tarleton
Blog० तरीका तपाईको ब्लग प्रचार गर्न को लागी
राम्रो जानकारी, यसले देखाउँदछ कि मार्केटिंग, भविष्यमा पूर्ण रूपमा सामाजिक मिडियामा निर्भर गर्दछ किनकि सोशल मिडियामा तेजी आउँदैछ।